မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဒီဂျေ Ken ရဲ့ မသိစိတ်... Interview with Jang Keun Suk
Posted by mabaydar at 9:22 PM
ငါနဲ့ နင်လား ငါလားပဲ. . .
နင်က နင် . .
ငါက ငါ. . .
ကိုယ်လည်းစလုံး အင်းဂလိပ်ကို စိတ်လေတယ်။
4/28/2010 1:32 PM
JKS's pronunciation is better than inverviewer
4/29/2010 6:03 PM
အမ လုံးဝထောက်ခံတယ်။ အဲဒီစလုံးတွေက နေရာတကာ မြောက်နေတာ။ သူတို့နိုင်ငံက Star ဆိုတာတွေက စလုံးမှာတောင်ဈေးကွက်မရှိလို့ တရုတ်ပြည်သွားပြီး ကားရိုက်ရတာတွေ။ တရုတ်ကသာ မသုံးရင် ဘာမှသုံးစား မရတာတွေ။ အဲဒါကို ဆရာကြီးအထာလုပ်ချင်သေးတယ်။ အမြင်ကပ်တယ်။
really he is professional and communication skill is very good....
5/01/2010 10:42 AM